सत्ता परिवर्तनका वाहक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणालाई घरबाहिर निस्किनै खतरा, देउवा सरकारले लियो एक्सन ! – Hamro24News
July 22, 2021 adminLeaveaComment on सत्ता परिवर्तनका वाहक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जंगबहादुर राणालाई घरबाहिर निस्किनै खतरा, देउवा सरकारले लियो एक्सन !
सत्ता परिवर्तनका वाहक बनेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सुरक्षा खतरा बढेको छ । बहुदलीय ईतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्तीको आदेश दिएका उनीमाथि सुरक्षा खतरा बढेपछि शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार एक्सनमा उत्रेको हो ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
संसद विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा तत्कालीन सरकारको विपषमा फैसला आएपछि उनलाई दिँदै आएको सुरक्षामा थप गरिएको छ ।
राण्णलाई सुरक्षा चुनौती बढेको वर्तमान सरकारले उनको सुरक्षामा ध्यान दिँदै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ ।
उनको नीजि निवासमा पनि सुरक्षाकर्मी बढाइएको छ भने सकारी निवासमा समेत सुरक्षाकर्मी बढाइएको एक प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए ।
‘अहिले उहाँको सुरक्षा चुनौती बढेकाले थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु भन्ने गृह मन्त्रालयको आदेश आएपछि एक कम्पनी सुरक्षाकर्मी थप गरेको छौं’, ती सुरक्षा अधिकारीले भने ।
संसद पुनस्थापनापछि सार्वजनिक सडकमा उहाँको सवारी हुँदा सुरक्षाकर्मीको स्कटिङ पनि अधिपछिको भन्दा बढी देखिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
यता एमाले केन्द्रीय कमिटीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाभियोग लगाउने सम्भावनाको चर्चा भएको छ ।
र, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएकै रात राष्ट्रपतिद्वारा भलाकुसारी गरिएका तीन पात्रमा केपी ओली, ईश्वर पोखरेल र यिनै महेश बस्नेत थिए ।
यता आन्तरिक विवादमा रहेका एमालेका दुवै समूह यति बेला ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएपछिको अवस्थामा एमालेका दुवै समूह आन्तरिक छलफलमा जुटे पनि आगामी बाटोबारे निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्। दुवै समूह एकअर्काको निर्णय कुरेर बसेजस्तो देखिएको छ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
सोमबारको बैठकमा देउवालाई मत दिने सांसदलाई पार्टीबाट तत्कालै निष्कासन गर्नुपर्ने आवाज उठेको भए पनि मंगलबार भने एकताको पक्षमा आवाज उठेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए। पार्टीको विवाद निरूपण कार्यदलमा रहेका सुवास नेम्वाङले पार्टी एकताको सम्भावना अझै रहेको बताएका थिए। उनले कार्यदलका कामकारबाहीबारे बैठकलाई जानकारी गराएका थिए।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****